Xabadjoojinta Suuriya - BBC Somali
6 Maarso 2016
Xabadjoojinta aan adkeyn ee Suuriya ayaa weli socoto kaddib toddobaad markii la hirgaliyay.
Suuriya oo dhan dagaalka waxa uu ka socdaa goobo badan. Ciidamda mucaaradka waxay ku eedeynayaan kuwa dowladda weerarada safafka hore.
Toddobaadkii tagay ayuu ahaa kii ugu deganaa sanado. Bartamaha Dimishiiq, meel ay dowladdu xukunto ayey dadka reer Suuriya waqti ku qaadanayeen qaboobaha iyagoo welwel ka qabin hoobiyayaasha mucaaradka ee ka imaanaya dibadda magaalada.
Meelaha ay mucaaradku haystaan, dadka ayaa wadooyinka u soo baxay iyagoon ka baqaneynin duqeynta madaafiicda, mana is dhimin dalabkoodii ahaa in isbadal yimaada dhibkasta oo Suuriyaan badan ay soo mareen.
Gargaar badan ayaa la gaarsiiyay meelaha ay waqtiga dheer go'doomiyeen dhinacayada dagaalamaya, waxayna Qaramada Midoobay sheegayaan inay tahay in wax badan la qabto, si dhaqso ahna loo sameeyo hadii Suuriyaanku doonayaan in xabadjoojintu waarto.